Sumcadaha Khabiirka Siyaasadeed 7 Muuqaal Sawirada Sawirada
goobta, ama iyada oo aan ogolaansho ka helin webmaster. Inkastoo xoqitaanka gacanta loo saarayo, farsamooyinka khariidadaha webka ayaa badbaadin kara wakhtiga iyo tamartaada. Kuwani waa farsamoyin qiimo leh oo aan macquul aheyn hubin la'aan iyo qalad.
Google Warshadaha waxaa loo isticmaalaa sidii qalab xoogan oo wax lagu duubo. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee ugu caansan webka. Waa faa'iido leh marka goosashadu ay rabto qaabab gaar ah ama xog laga soo saaro blog ama goob. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa midaan si aad u hubisid in goobtaadu tahay mid xoqan ama aan.
Waa farsamayn joogto ah oo la xidhiidha qaabka loo isticmaalo isku xirnaanta amarrada UNIX grep oo la socda luqadaha barnaamijka caanka ah sida Python iyo Perl.
3. Maaraynta buunshada: farsamooyinka nuqul-dhajinta:
Buuggan xajinta waxa sameeya qofka isticmaala oo waqti badan iyo dadaal badan ayuu qaataa. Hawlaha intooda badani waa kuwo soo noqnoqonaya oo waqti badan qaata maaddaama aad u baahan tahay in aad ka qaadato mawduucyo ka yimid bogag badan oo aan ku wareejin websaydhayaashu inay ogaadaan waxqabadyadaada. Qaar ka mid ah barnaamijyada websaydhka iyo kuwa horumariya ayaa isticmaala ujeedooyinkaas.
4. Farsamaynta farsamada HTML:
5. DOM Farsamaynta Farsamada:
Qoraalka Naqshadda Qoraalka (oo sidoo kale loo yaqaan DOM) waa qaabka, nuxurka, iyo dhismaha bogga internetka oo leh waraaqo gaar ah oo XML ah Isgaadhsiinta si weyn ayaa loo adeegsadaa DOM calaamadaha si qotodheer u ah xogta ku saabsan dabeecadda iyo dhismaha shabakad. Waxaad isticmaali kartaa DOM-ka Dareerayaasha si aad u hesho xogta waxtarka leh.Gabad ahaan, waxaad isku dayi kartaa qalabka sida XPath iyo jaranjarada boggaga internetka ee ugu xiisaha badan boggaga internetka ee buuxa sida Mozilla iyo Chrome ayaa loo adeegsan karaa in lagu soo saaro bogga oo dhan, ama qaybo kooban, xitaa marka ay maqaarku yihiin kuwo gacanta lagu soo saaro oo ay yihiin dabeecad firfircoon
6. Nidaamka isku dhafka galka:
B Shirkadaha yaryar iyo ganacsiyada waxay si weyn u isticmaalaan farsamooyinka qoyaanka qotodheer ee leh awoodda kombiyuutarada culus. Waxay ka caawisaa bartilmaameedka qayaxan ee lagu caddeeyey oo waxay ku socotaa xogta qalabka daruuriga ah. Abaabulidda iyo kormeerka qaanadaha ee qormooyin gaar ah ayaa loo sameeyaa iyada oo la adeegsanayo farsamadan, oo aan loo baahneyn faragelin bini aadaminimo.
Luqada XML Path (oo dhawaan lagu qoray XPath) waa luqad su'aal ah oo ka shaqayn doonta dukumentiyada XML si habboon. Maadaama dukumintiyada XML ay ku lug leeyihiin dhowr dhisme oo dhowr ah, XPath waxay kaa caawin kartaa inaad ku dhex socoto geedaha adoo dooranaya noodar ku salaysan noocyada iyo xuduudaha. Farsamadani waxa kale oo loo isticmaalaa isku-xidhka labada DOM-ka iyo faallaynta HTML. Waa faa'iido leh in laga soo saaro bogga oo dhan iyo daabacaan qaybaha kala duwan waxay cuneen goobaha la rabo.
Haddii aadan rabin mid ka mid ah farsamooyinkan oo raadinaya qalab, waxaad isku dayi kartaa Wget, Curl, Import.io, HTTrack ama Node.js Source .